Weftiga ka socda Madaxtooyada ee Warshadaha Difaaca, Karabük Iron iyo steel Enterprises (KARDEMIR) AS. KARDEMİR AŞ wuxuu martigaliyay wafdi ka socda Madaxtooyada warshadaha Difaaca. Soosaarka KARDEMİR iyo [More ...]
Founder of the Republic of xnumx'l Hogaamiyaha Great Mustafa Kemal Ataturk kaas oo bilaabay sannaddii "drive warshadaynta qaranka" hoos aasaaskii warshadaha ugu horeysay culus Iron iyo Steel tuuray Turkey Karabük Iron iyo Steel Works (KARDEMİR) INC., [More ...]
Qalalaasaha Tareenka ee Wadada Sublredere
Qalalaasaha tareenka ayaa ka qarxay magaalada Narlıdere Metro, oo İzmir Caasimad-magaalo oo qandaraas u siineysa Gülermak Dhismaha Wershadaha culus iyo Qandaraaslaha oo ay la gashay 1 bilyan 27 milyan oo gini sanadkii hore. Ercan wuxuu ka yimid EGELİ MORNING [More ...]
Xarig Tram oo laga sameeyay Waddada Istanbul
Dowladda Hoose ee Düzce waxay bilowday inay ka shaqeyso dib u habeynta Waddada Istanbul. Wasiirka Sayniska, Warshadaha, Teknolojiyadda iyo Duqa Magaalada Düzce Faruk Özlü wuxuu dhowaan ku dhawaaqay dib u habeynta mashruuca Istanbul Street [More ...]
Ruushka gudaheeda, tareen xamuul oo xamuul qaada ah ayaa xaalufiyey markii uu dillaacay burburka roob da’ay awgeed. Tareen xamuul qaada oo siday dhuxul burburay roobab mahiigaan ah oo ka da’ay magaalada Siktiyvkar ee Jamhuuriyadda Komi ee Russia [More ...]
Tareenka korontada ee 7 wuxuu ku yimid Bursa
Waxay ahayd 1990 ama 1991. Waxaan tagnay shil tareen ah markaan ka shaqeyneyno Bursa Hakimiyet ee Fomara Han. shilalka; Wuxuu ahaa Gökçedağ, oo ah degmada Harmancık oo ku taal xuduudda Kutahya ee magaalada Bursa. Ilaa hadda aan xusuusanno; Tareenka madow, jaahwareerka, tareenka [More ...]
Shaqada tareenka waxaa loo arkaa inuu yahay midka ugu shaqada badan adduunka mana garan karno sida tareenka u joojiyo shaqadiisa marka uu gudbo. Lithuania, jawiga shaqo ee adag ee shaqaalaha dayactira iyo dayactirka birahaas. [More ...]
U tababbar adhijirkii doonaya inuu idaha ku kaxeeyo Manisa
Degmada Turgutlu ee Manisa, oo ah adhijirka 63-da ah ayaa dhaawacmay markii uu ku dhuftay tareen rakaab ah intii uu isku dayayay in uu ido ka qaato jidka tareenka. Dhacdadu waxay dhacday xilligii 11.00, oo u dhow Mustafa Kemal Neighborhood. Hayrettin Ölgen, adhijirkii xayawaankiisa, [More ...]
Warbixinta Sales ka soo KARDEMİR!
Warshadaha birta iyo birta ee Karabük (KARDEMIR), birta dhismaha, birta, ubaxa, astaamaha, xaglaha, tareenka, wareega adag, miinada, xarkaha, usha iyo iibka ugu sarreeya ayaa la sheegay in la diyaariyey. Madal Faafin Dadweynaha Kardemir (KAP) ayaa la daabacay [More ...]
Caruurnimada Carbeed ee Ankara
Tareenka shidaalka ee degmada Sincan ee degmada Ankara ayaa liqay. In kasta oo qofna lagu dilin ama lagu dhaawacmin shilka, tareenka lama fulin karin xitaa qiyaastii 2 saacadood. Marka loo eego macluumaadka la helay, saacadaha 01.30 [More ...]
25 ilaa 4 loogu talagalay 15
8 Luulyo 2018 Çorlu degmada Tekirdağ, caddeynta ku saabsan geerida 25 qof iyo shilka tareenka ee sababay dhaawaca qofka 340 waa la aqbalay. Dacwada gudaheeda, garsoorku wuxuu ka hooseeyaa wadada tareenka wuxuuna marayaa 1873 [More ...]
Qoob-ka-cayaarka Mashiinka leh ee Wolves oo ku yaala gawaarida
Sawiro aad uqurux badan oo farsamayaqaanada TCDD oo ku ciyaaraaya wadooyinka tareenka iyadoo leh yey ku taal duuleedka Bariga Dnadolu. Tareenka madow wuxuu ku amaahdaa dabiiciga hortiisa; siinta wolf. [More ...]